Chii chinogadziriswa fiber? Ivo vanoshandiswa sei mukucheka zvigadzirwa? - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Chii chinogadziriswa fiber? Ivo vanoshandiswa sei mukucheka zvigadzirwa?
Yakaregedzerwa fiber imwe yemhando yefefe yakagadzirwa kubva kumarara emarara, mapurasitiki nenguo nekubatanidza nzira dzemakemikari uye dzemuviri nemaitiro ekusvetuka. Iyo inokanganisa iyo yakasarudzika fiber yakasviba zvinyorwa zvinyorwa, ndinogadzirisa marara, inogadzira iyo nyowani nyowani yakafanana neyekutanga fiber, inoziva kubatana kwegirini, kudzokorodza uye yakakwira shandiso yekushandiswa.
Hazvisi nyore kugadzirira girini yakadzokororwazve fiber, iyo inonyanya kuzikanwa nenzira dzomuviri uye dzemakemikari. Maitiro epanyama anoreva kushandurwa kwemuviri kwebhodhoro retsi kuti riite fiber kana zvimwe zvigadzirwa nenzira yekunyungudutswa. pari zvino, pane kazhinji nzira mbiri :(1) zvakananga kuburitsa bhodhoro pepa fiber; (2) bhodhoro rinotanga kushandurwa kuita zvimedu kana kuti marara (granulation), uyezve izvo zvimedu kana kuti marara zvinoraswa uye zvogocherwa mumafuroni. Izvo zvemakanika zvimiro zvezvigadzirwa zvakagadzirwa nenzira yemuviri hazvina kunaka, uye zvakanetsa kusangana nezviyero zvemachira.
Maitiro emakemikari anosanganisira kuisa pasi pekupora polyester yakadzokororwa kuita mamorekuru, dzinobva dzadzoreredzwa mumhando yepamusoro yepolyester chips, idzo dzinobva dzatsemurwa kuita tsvina. Iyo nzira inogona kuziva kudzokorora kwakakwana. Mukupesana ne, iyo nzira yemakemikari inokura zvishoma nezvishoma nekuda kwekuyerwa kwemubatsiro, mbishi zvigadzirwa uye kugadzirisa. saka, kwakawanda kwekudzorerwazve kwemukati kweye PET bhodhoro pepa kunoonekwa nenzira yemuviri.
At present, iyo musika inodikanwa yekucheka zvigadzirwa iri kuchinja kubva kumhando yepamusoro uye mutengo wakaderera kune tekinoroji, fashoni uye girini. saka, Iko kuvandudza kwemaindasitiri yekucheka hakufanani kubva mukuvandudzwa uye kushandiswa kwezparizvinosva zvefaira. At present, misika yemumba neyekunze, vanhu vanofarira zvakanyanya kushanda, kabhoni yakaderera, zvakapoteredzwa zvine hungwaru machira, saka fiber yakashandiswazve ine mushandirapamwe wakakura mukugadzira zvigadzirwa.
Mhosva yacho inoratidza
1. Iyo yakarukwa jira yakarukwa neyakagadziridzwa polyamide / yakagadziriswazve polyester / spandex inogamuchirwa mumitambo underwear. Yayo ina-mativi mana akaomarara mamiriro ane yakakwirira elasticity, iyo inogona kunyatso kudzivirira yakawandisa kwetsandanyama kudedera kunokonzerwa nekushanduka kwemuviri panguva yekurovedza muviri uye kugadzirisa kupisa kwemuviri uchitsvaira.
2. Adopt Greenpoly inogadziridza polyester (75 D) isina mupendero wechipfeko, iyo yakasikwa nharaunda uye yakaderera kabhoni, kunyorova uye kuputika kwemvura, nekunaka kwakanaka, kupfeka kupesana uye kusimba kwechimiro.
3. Iyo Sweden arctic fox hoodie inogadzirwa neyakagadziridzwa polyester fiber uye mvere dzakapendwa mune yekutanga mhinduro. Iyo jaketi inodziya uye yakasununguka yemachira yakarongedzwa nejira rakasungirirwa pasi uye rakapfava rakabhuroka remukati. Iyo mesh wool lining yehomwe yakagadzirwa neyezve inogadziriswa polyester fiber.
Your client does not have permission to get URL /translate_a/t?client=te&v=1.0&tl=sn&sl=en&tk=769474.888434 from this server. That’s all we know. , uye weave yakakwira-density yakarukwa machira muWebhu yakarukwa yakakura denderedzwa muchina kana yakakwirira-yakakurumidza warp yekucheka muchina pamusoro peE40, neakakwira elasticity uye yakanaka drape.
5. Yakagadzirwa sutu jira rakagadzirwa 50 ~ 75 D recycled polyester + (40S ~ 70S) compactly spun pamba mucheka kana~50 ~D akagadzirisazve polyesterster + (Nm 50 ~ Nm 80) yoda, crisp uye ine mwero elongation.
6, muSantoni (Santoni) SMDJ2T kana E14, E16 maviri-akasendama jacquard muchina, ne 50 ~ 75 D akagadzirisazve polyester + yakagadziriswazve polyamide fiber ine mavara silk kugadzirwa weft yakarukwa shangu zvinhu, inogona kuumba maviri-mavara kana akawanda-mavara mavara, yakagadziridzwa polyester kugadzirisa kusindimara uye chimiro cheshangu, yemuchina wekutenderera uchisunda shangu dhizaini nekugadzira kuti ipe kuvandudza nzvimbo.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota teerera kuchinyorwa "kushandiswa kweiyo yakagadziriswazve fiber mukucheka kugadzira" mune yenyaya yechipiri yemachira emachira mune 2020.
Kushandiswa kweanomatadium mumachira anoshanda kupedzisa